Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd estabilished ngo-1993 Ukususela ngoku engundoqo kufuneka sithethe ngezinto ezintathu zemveliso ngokulandelelanayo zibekwe 1.Qingdao Shangdong, 2.Xi'an Shanxi kunye 3.Liuzhou Guangxi. Setted up Ofisi 28 Inkonzo Corporate in basekhaya phesheya ..
"CO-NELE brand" luphumba intanda German phambili kwaye engqongqo zobugcisa, sabadibanisa kubuchwephesha uphando, imveliso, ukuthengiswa kunye nasemva-intengiso inkonzo kunye.
oomatshini Construction kuquka Boom Pump Truck 25m ukuya 56m, Concrete Ukufaka Boom uhlobo mfono HGY13 ku HGY23, Self uhlobo Ukutsiba 24m ukuya 35m, aggregate Small entle XBS lezibuko Impompo eziphathekayo 20-40m3 / h, JBT Uthotho eziphathekayo Umxhubi Pump 30-40m3 / h; HBT Uthotho eziphathekayo Pump30-100m3 / h, Shotcret ukuspeyita Machine, kugecwa Plant njalo njalo.
Okwangoku, iimveliso zethu ibifumaneka lonke China kwaye aye athunyelwa eRashiya, Korea, Kazakhstan, Iran, Mongolia, iYiputa, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Australia, Romania, eMelika, Niger, Congo, Mauritius kunye namanye amazwe . CO-NELE ukusebenza kwayo super nomoya babenethemba bakhonza ukuba kulo lonke ihlabathi.
Iimpawu zoKwakha ikhonkrithi ...
Ungasisombulula njani isincoko esivelileyo ...